Mbola mirongatra ny kitrotro : Miisa 15 049 ireo voany -
AccueilSosialyMbola mirongatra ny kitrotro : Miisa 15 049 ireo voany
27/12/2018 admintriatra Sosialy 0
Mbola tsy voafehy ny aretina kitrotro eto Madagasikara amin’izao fotoana izao. Manaporofo izany ny fitomboan’ny olona voany sy ny distrika ahitana izany. Tsy ny ankizy, tsy ny lehibe voany avokoa. Na eny amin’ny tobim-pahasalamana lehibe na eny amin’ny mpitsabo tsy miankina dia filaharana mandavareny no hita. Araka ny tatitra ny ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka ny 25 desambra teo dia olona 15 049 no voany nanomboka ny 1 oktobra hatramin’ny 21 desambra, ao anatin’ny distrika miisa 48. Eto Antananarivo Renivohitra no tena betsaka amin’izany izay miisa 8 864. Manaraka azy ny distrikan’Ambato Boeny izay 947 isa, Marovoay miisa 693, Mahajanga I miisa 518, Ambohidratrimo miisa 466, Antananarivo Atsimondrano miisa 412, Ambositra miisa 367, Ambatondrazaka miisa 348, Toamasina I miisa 336, Ambatolampy miisa 254, Antanifotsy miisa 243, Arivonimamo miisa 191, Morondava miisa 165, Ambohimasoa miisa 133, Amparafaravola miisa 113, sns….
Hisy vaksiny nasionaly amin’ny 2019
Ny fanaovana vaksiny ho an’ny zaza latsaky ny 5 taona ihany no fiarovana amin’ny aretina kitrotro raha ny fanamarihan’ny ministeran’ny Fahasalamana. Ankehitriny anefa, lany tanteraka ny vaksiny eny amin’ny ministera noho ny fiparitahan’ny aretina haingana dia haingana. Noho izany, ireo zaza latsaka ny 12 volana sisa no afaka hatao vaksiny. Izany moa dia ilay vaksiny mahazatra hatao rehefa feno 9 volana ny zaza iray. Na dia izany aza anefa, tsy nipetra-potsiny ny ministera fa nanafatra vaksiny indray mandeha mba hahafahan’ny zaza malagasy rehetra ho voaro amin’ity aretina mandoza ity ary misy tonga amin’izao fotoana izao saingy mbola tsy afaka ampiasaina fa miandry ny fahatongavan’ny vaksiny sasany, raha ny fanazavana voaray teny anivon’ny ministera. “Efa misy vaksiny tonga fa mbola tsy ampy io. Marihina fa tsy afaka indray tonga ireo vaksiny fa mandeha isaky ny andiany ka mbola ny andiany voalohany ity tonga ity ka rehefa feno amin’izay vao afaka manao vaksiny faobe indray. Fa efa vonona kosa ny fanomanana rehetra. Tsipiako fa tsy mandeha sambo ireo vaksiny fa mandeha fiaraha-manidina ary fiaraha-manidina tsotra mahazatra ka tsy afaka mitondra maro”, hoy ny tompon’andraikitra iray teny anivon’ny ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka. Fantatra moa fa hanantanteraka vaksiny manokana ny ministera amin’ny fiandohan’ny taona 2019 iny mba hifehezana ny aretina kitrotro. “Hanao vaksiny manokana ny ministera amin’ny fiandohan’ny taona 2019 iny. Mbola tsy voafaritra mazava ny daty fa mety misasaka ny volana janoary ho avy io na faran’ny volana janoary izany. Marihiko fa vaksiny nasionaly no atao amin’io fotoana io raha teto Antananarivo Renivohitra fotsiny no natao tamin’iny hetsika farany iny”, hoy hatrany ny fanazavana.